Tany mampiasa teny frantsay : mila hamafisina ny fifandraisana ho an’ny fikarohana, fanofanana … | NewsMada
Tany mampiasa teny frantsay : mila hamafisina ny fifandraisana ho an’ny fikarohana, fanofanana …
Fantatra fa mbola betsaka ny tratra aoriana eo amin’ny fampandrosoana amin’ireo firenena afrikanina 21 mampiasa teny frantsay, anisan’izany i Madagasikara. Hita mibaribary izany amin’ny sehatry ny fotodrafitrasa, fanabeazana, tontolo iainana, fahasalamana, tsy fahampian-tsakafo. Samy manana ny fomba fijeriny mahatonga izany ireo fikambanana iraisam-pirenena maro hatrany amin’ny olom-pirenena tsotra. Ny itovizana : ratsy tantana noho ny raharaha politika ny toekarena any amin’ireo tany afrikanina mampiasa teny frantsay. Tsy ny harena azo trandrahina akory no tsy misy fa tsy tonga any amin’ny vahoaka mivantana ny tombontsoa azo avy amin’izy ireny.
Samy manana ny toerany sy mampiavaka azy ny tany tsirairay, miaraka amina kolontsaina samihafa ihany koa. Misy anisan’ireo ny firenena matanjaka indrindra eran-tany, G8 sy G20. Ao koa anefa no ahitana ireo tratra aoriana sy ny mahantra indrindra. Koa politika vaovao nofaritan’ireo lohandohany mpitantana ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny samy tany mpikambana. Fitaovana iray lehibe ny teny frantsay ho amin’ny fikarohana, fanofanana, tambanjotran’ny asa, fiaraha-miombon’antoka.
Tokony hisondrotra amin’izay ny toekarena afrikanina any amin’ireo tany mampiasa teny frantsay. Fitaovana iray hahafahan’izy ireo manao izany asa izany ny fampiasana teny frantsay. Hanamafisana izany ny fivoriambe hatao eto amintsika amin’ny volana novambra 2016. Efa samy manana ny paikadiny ny firenena tsirairay, koa fanararaotana lehibe io fotoana io ho an’ny mpandraharaha malagasy sy vahiny miasa eto, hisokafana bebe kokoa hahitana mpiara-miombon’antoka maro. Ny teny frantsay rahateo, fampiasa ho an’ny fandraharahana mitovy amin’ny teny anglisy.